Fikradaha naqshadaynta ee 24 Cuntada ee loogu talagalay ragga iyo dumarka - Fikradaha farshaxanka
Fikradda naqshadaynta ee 24 Cabbireed ee ugu wanaagsan ee loogu talagalay ragga iyo dumarka
Sonitattoo August 4, 2016
Cunnooyinka loogu talagalay isticmaalka shaati-baro ayaa waxay noqdeen wax aan waqti dheer socon karin. Sanadihii la soo dhaafay, isticmaalka qoob-ka-ciyaarka ayaa soo galey muuqaal gaar ah oo ku dhex yaal guryaha dadka saboolka ah iyo kuwa hodanka ah.
Waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan helin tattooadaada #. Waa inaadan deg degin nidaamka. Habka, naqshadeynta iyo muuqaalka waa qaar ka mid ah qaybaha muhiimka ah ee tattoo qoorta. Waxyaabaha soo socda ee aad ka fekeri karto waa fanaaniinta iyo meesha aad ka heli karto.
Tattoo Butterfly Neck Tattoo
Waa inaad waqti qaadataa si aad u eegto naqshado badan oo internetka ah. Iyada oo naqshad la mid ah sida farshaxankaagu wuxuu awoodi doonaa inuu helo #idea waxa aad runtii rabto.
Waxaa jira qadar qoto dheer oo ah qoorta gaarka ah #tattoo internetka oo aad kala dooran karto. Haddii aadan awoodin inaad kala doorto naqshado farabadan sida tattoo qoorta, markaa farshahaagu wuxuu sameyn karaa naqshad laguu qaabeynayo.
Waa inaad ahaataa 100% ku qanacsan tahay # dukumintiga ka hor intaadan samayn karin doorashadaada.
Tattoo Super Neck
Meeleyntu si fiican ayey u socotaa oo aadan ka helin wax ka duwan haddii aad la xiriirto farshaxan wanaagsan si uu kuu caawiyo. Shaqada farshaxanku waa waxa ku qancin kara in qofka uu ku fiican yahay qoorta sawir-gacmeedka.
Ma jirto hab aad ku heli karto tinto qoorta oo joogto ah oo aad neceb tahay. Waxaa ugu fiican in aad marka hore maskaxdaada ka samayso naqshadeynta aad u baahan tahay ka hor intaanadan u socon.
Tattoo Sweet Neck
Meeleyntu waa mid aad u muhiim ah taas oo ah sababaha ugu badan ee aad u hubin lahayd inaad horay ugu soo shaqeysay casharrada gurigaaga ka hor intaan la madadaalin.
Tattoo Cute Cute
Tattoo caan ayaa noqotey isbeddel aan laga yaabo inaysan marnaba jajabin sanado badan. Sababta tani waxay sabab u tahay sida ay dadku ula imaanayaan hal abuur leh cajiib ah. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto midab ama xitaa isku day inaad habka qoortaada u eg tahay.
Kharashka lagu helo tattoo qoorta ayaa u dhexaysa meel u dhow. Farshaxanayaasha waxay kaloo leeyihiin qiimo kala duwan qiimaha adeegyadooda. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad waqti qaadato si aad u baadhisid waxoogaa internet ah si aad u hesho qiimo qumman oo ku saabsan tattoo qoorta sida quruxda badan.
Tattoo Great Neck
Weligaa ma ka yaabisay sida taatuuga qoorta ah uugu soo baxday? Waqtiga ku soo galay, dareenka la bixiyay iyo kharashku waa qaar ka mid ah waxyaabaha aad ka fiirsan kartid markaad u socoto qoorta-qoorta. Waxaad leedahay wax badan oo madadaalo ah markaad leedahay tattoo qoorta oo kale sida tan.
Tartanka Super Neck
Dhibaato kuma jirto qayb ka mid ah adduunka oo aanad arki karin qof leh tattoo. il image
Xitaa dhedigga ayaa ku raaxeysta quruxda ka timid isticmaalka tattoo. Waxaanu ku aragnaa dadka lagu sharraxo qaybo kala duwan oo jirkooda ah. Qeebkee qeybta ka mid ah jidhkaaga ma rabtaa in tattoo lagu sameeyo? il image
Tattoo qoorta ayaa caan ka noqday naqshadaha badan iyo qaababka ay la yimaadaan. il image
Waxaa jira meelo aad u badan oo aad ku dhejin kartid naqshaddaada tattoo oo aad u qurux badan. Hase yeeshee, waxaa jira qaybo kale oo jirka ka mid ah oo naqshadeynta tattoo laga yaabo inay farqiga weyn u yeelato qoorta. il image
Tattoo qoorta ayaa noqon kara wax kasta oo qof kasta oo doonaya in uu ku dhicin inuu naqshad samaysto. il image
Marka aad diyaar u tahay in aad hesho qaabka tattoo quruxsan, waxaad u baahan kartaa inaad hesho taageerada tattooist wanaagsan oo kaa caawin doona inaad hesho. Naqshaduhu waxay noqon kartaa abuuritaanka kuu gaar ah oo laga yaabo inay ku qaadato wakhti inaad ogaato. il image
Ma jeceshahay naqshadahan? Waxay kuugu haboonaan kartaa si fiican haddii aad dhab ahaantii rabto inaad yeelato naqshad cajiib ah oo qoortaada ku jirto. il image
Marka la eego tirada naqshadaha iyo sawirada si ay u kala doortaan, nooca naqshadahan waa inaad isticmaashaa? il image
Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay ka fekeraan sida ay u jilicsan yihiin gaar ahaan dumarka. Waxaanu ku xasuusin doonaa in qoorta tattoo ay adkaan karto in la qariyo. il image
Tattoo qurux badan sida tan waxay kaa caawin kartaa inaad hesho dareenka aad rabto. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto mid ka mid ah shaati-yada, waxaad ogtahay in adduunka oo dhan uu arkayo. il image
Isticmaalka qashinka qoorta ayaa noqotay wax ay dad badan oo jecel u isticmaalaan isticmaalka. Waxaa jira noocyo badan oo naqshado iyo qaabab kuwaas oo ku imaan kara qoorta sidan oo kale.
Tattoo qoynta waxaa loo isticmaali karaa mid macquul ah sababtoo ah habka ay u yimaadaan gaar ahaan haddii aad qaadato tattoo saxda ah ee naftaada. il image
Miyuu jecel yahay habka jimicsigaan loo qoondeeyay qoorta? il image
Halkan riix halkan Tattoos
libto libaaxtattoos ubaxtattoos moontattoos saaxiib saxa ahTartoo ubax badansawirrada ragganaqshadeynta mehnditattoo indhahaarrow Tattoosawirada malaa'igtatattoos qosol lehwaxaa la dhajiyay tattoostattoos taajkiiTattoo infinitytattoos gacantaku dhaji tattoosshimbir shimbirlaabto laabtagadaal u laaboTattoo Feathersawir gacmeedTattoos Wadnahacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahtattoos iskutallaabtatattoostattoo biyo ahjimicsiga bisadahawaxay jecel yihiin tattoosTilmaamta jaalaha ahtattoos qabaa'ilkasawirada gabdhahatattoo dheemantattoo tilmaantattoo maroodigashaatiinka shiidanhenna tattooDhaqdhaqaaqatattoos qoortatattoo ah octopusmuusikada muusikadatattoos cagtatattoos qorraxdatattoos sleevekoi kalluunkaJoomatari Tattoostattoos eagletaraagada kubbaddalammaanahafikradaha tattoogaraacista gacmaha